Hanana andraikitra lehibe kokoa amin'ny Internet aorian'ny fandehanan'ny areti-mifindra
Home » Lahatsoratra farany farany » teknolojia » Hanana andraikitra lehibe kokoa amin'ny Internet aorian'ny fandehanan'ny areti-mifindra
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • fiantsenana • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Fitaovana teknolojia azo tratrarina eny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny tobin'ny fitaterana hafa dia afaka mamela ny mpandeha hanao fomba fanao amin'ny fanalavirana ara-tsosialy araka ny tokony ho izy ary mitazona hatrany ireo torolàlana fanarahan-dalàna momba ny fahasalamana sy fiarovana, izay miteraka ny fiparitahan'ny COVID-19 ary mahatonga ny mpandeha hahatsiaro ho voaro.
Ny rindranasa mifandraika dia mety hahatonga ny fizotran'ny fizahan-tany ho azo antoka kokoa manerana ny tanàna marani-tsaina na toeran-kaleha, amin'ny alàlan'ny fampitandremana amin'ny fotoana tena izy momba ny valalabemandry.
Ny rindranasa mifandraika dia afaka manamaivana ny tahotra any amin'ireo faritra tsy miankina amin'ny fanjakana ihany koa.
Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ho miadana amin'ny fanarenana azy dia ny tahotra ara-pahasalamana sy fiarovana hatrany eo amin'ireo mpanjifa.
Ny teknolojia Internet of Things (IoT) dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny ahiahin'ireo mpandeha momba ny fahasalamany manokana sy ny fahasalaman'izy ireo, ary mamela ny orinasam-pizahan-tany sy fizahan-tany hanangona tahirin-kevitra marobe ho an'ny tombontsoa anatiny sy ivelany. Nomarihin'ireo manampahaizana manokana momba ny indostria fa ity teknolojia ity dia hanana andraikitra lehibe kokoa amin'ny diany aorian'ny pandemika vokatr'izany.
Ny tatitra misy ny lohahevitra farany, 'IoT in Travel & fizahan-tany', dia nilaza fa ny fitaovana teknolojia azo ampiasaina amin'ny seranam-piaramanidina sy ny tobim-pitaterana hafa dia afaka mamela ny mpandeha hanao fomba fanao mahitsy eo amin'ny sehatry ny fahasarotana ara-tsosialy ary hitazona ireo torolàlana fanarahan-dalàna momba ny fahasalamana sy fiarovana hafa, izay miteraka ny fielezan'ny Covid-19 ary mitazona ny fahatokisan-tena ireo mpandeha.
Ny rindranasa mifandraika dia mety hahatonga ny fizotran'ny fizahan-tany ho azo antoka kokoa manerana ny tanàna marani-tsaina na toeran-kaleha, amin'ny alàlan'ny fampitandremana amin'ny fotoana tena izy momba ny valalabemandry. Ireo fampitandremana ireo dia azo alefa any amin'ny fitaovana finday an'ny mpandeha amin'ny alàlan'ny teknolojia fanilo, manome torohevitra azy ireo handray lalana hafa, izay mampihena ny loza ateraky ny viriosy mandritra ny fahatapahan'ny tanàna.
Ny rindranasa mifandraika dia afaka manamaivana ny tahotra any amin'ireo faritra tsy miankina amin'ny fanjakana ihany koa. Ohatra, HiltonNy haitao 'Connected Room' dia mamela ny vahiny hampiasa ny fampiharana Hilton Honors hitantana ny ankamaroan'ny zavatra tokony hataon'izy ireo amin'ny tanana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Manomboka amin'ny fifehezana ny mari-pana sy ny jiro ka hatramin'ny fahitalavitra sy rakotra varavarankely, ny teknolojia IoT dia mamela ny vahiny hampihena ny isan'ny fotoana tokony hikasihan'izy ireo ny faritra mety ho voaloto.
Ny COVID-19 dia nanimba ny dia sy ny fizahan-tany. Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny sehatry ny faharetan'ny famerenany azy dia ny fahatahorana hatrany ny fahasalamana sy ny fiarovana eo amin'ireo mpanjifa, izay nohamafisin'ny governemanta. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana momba ny indostria dia ny 85% n'ny mpanjifa dia mbola 'tena', 'somary' na 'somary' niahiahy momba ny fahasalamany noho ny areti-mandringana.